Sida loo abuuro Crypto Exchange - Blockchain News
Sida loo abuuro Crypto Exchange
Waxaana u bandhigaynaa in aad fiiro wareysi uu siiyay aasaasaha iyo CEO of Exchange Crypto ah btc-alpha.com Vitali Bodnar, sida si ay u abuuraan Crypto Exchange ka xoq.
Sidee ayaad u ogaato oo ku saabsan Cryptocurrency ah?
My takhasus waxbarasho – physics, sayniska kombiyuutarka, technology computer, Waxaan la joogto ah ku hawlan horumarinta. Calashaan waxaan filaan ah ka akhriyi on forum ku saabsan Seeraar oo waxay bilaabeen inay fahmaan maalintii, akhri wax walba oo ku saabsan sida ay u shaqayso.
Sidee aad galay warshadaha ee Crypto?
Waxaa oo dhan ku bilaabantay xaqiiqda ah in aan yaaban sida macdanta la socdaan. Ka dib markii gartaan hannaanka, waxaa jiray dhibaato kale – waxa la sameeyo iyada oo lacagta qadaadiicda aan qabtay. lacagta aan ka qaaday in ay is-weydaarsiga ah, taas oo, iyadoo jidka ag fadhida, ayaa si xun u shaqeeyo ka dibna. Sidaas si habsami waxaan wareegay ganacsiga.
Muxuu aad go'aansato in aad u baahan tahay si ay u abuuraan Crypto Exchange a?
Tan waxa u sabab aan failure ugu horeysay. I, sida ganacsade kasta oo wanaagsan, leeyihiin set oo ah xeerar aan marnaba kuma xad-ha: Waxaan la qorsheeyo ka hor dhibic ka tago ka booska ka, Ma shaqeyn markii aan culeys ahay, Waxaan isku dayaa in aan la hagaajin minuses ah, waxaa ka hawl yar ii sug, Anigu ma aan lagu iibin doono ha in maalinta marka aan si jaray socday, Waxaan kaliya la xiro my laptop oo aan shaqaynayn. My failure dhacay ay sabab u tahay stress, oo la joogo in aan kala jejebiyey oo dhan xeerarka kale. Waxaan galay heshiis negative, waxaa xiran xun, go'aansaday in lagu iibin doono. Waayo, maalin, waxaan sameeyay 10 hawlaha la seenyadan. Waxaan badiyay tobanaan dhowr kun oo doolar, kaas oo aan muddo aad u dheer kasbadeen.
Sidee tani saameyn abuurka Exchange ah?
Waxaan bilaabay si ay u falanqeeyaan xaaladda iyo ogaaday in ganacsade kasban kartaa, ama lumiso lacag. Laakiin is-dhaafsiga had iyo jeer ku jiraa abaalmarinta a. Waxaan ogaaday in tani ay tahay oo dhan arrin xiiso leh iyo in aan doonayo in aan abuuro aniga ii gaar ah Exchange Crypto.
Aynu ka dhigi 5 tallaabooyin si ay u abuuraan adiga kuu gaar ah Crypto Exchange.
Aniga ahaan, waxa ugu horeeya waa in la “la soo saarka gubaa.” Saaxiibbadaa oo dhanba aan, isbarteen, shisheeyayaal, Waxaan qof kasta oo aan soo koraya waxaa Crypto Exchange u sheegay oo waxaan loo baahan yahay koox, dadka, lacag, iyo qof kasta oo sheegay in this ma shaqeyn lahaa, laakiin waxaan rumaysad a waalan. Waxaas oo dhan wuxuu ahaa qiyaas ahaan in 2014-2015.
Tan iyo markii aan lahaa sumcad wanaagsan horumarinta mashaariicda, dadka si degdeg ah u muuqday kuwaasoo aan rumaysan cryptocurrency ah, ma in Exchange Crypto ah, ii sida horumariyaha ah oo abuuri kara wax soo saarka.
Markii hore, Waxaan wax fikrad ah in aad qaadi karto saldhig diyaar-dhigay of Cryptoexchange, si ay u beddeli yar, oo waxay ku shaqeyn doonaan. Sida dhufto ee loogu talagalay onlineshop. Laakiin wax soo saarka noocan oo kale ah ma jiraan. Daraysa galay mawduuca, Waxaan ogaaday in aan doonayo in aan ku qor wax walba oo ka xoq oo fahmaan wax kasta oo faahfaahsan.
Xisaabinta model ganacsiga oo dhan. Oo wakhtigaas waxaan bitcoinwisdom isticmaalo – mid ka mid ah ilaha ugu horeysay halkaas oo aad ka arki karin sida suuqa u guurayaan, oo kala dhig wax walba oo maalin, bil ah, oo arag muda ah. Tusaale ahaan, dhaafsiga hawlgallada maalin sameeyay on a 5000 bitcoins heerka sarrifka shuruud ah $ 500. Guddiga Exchange – 0.4%. 500 tarmaan by 5000 iyo by 0.4 oo waxaan ka heli faa'iido badan tahay maalin kasta.
Sidaas, model ganacsi is dhaafsi waa mid fudud ilaa xad?
Haa, Waxaan aaminsanahay in haddii ay wax ka mid ah waa mid aad u adag, ka dibna waxa aan ka shaqayn doonaa, wax fudud oo kaliya shaqeeyaan.
Diyaarinta farsamada khaaska. Waa inaan sheegaa in shaqo hore farsamo waxaan abuuray iyo natiijada ka helay jira waxyaabo aasaas kala duwan, sabab aan ma ay garan tiro aad u badan oo ah faahfaahinta, daqiiqado ka mid ah in u muuqday ii aad u muhiim ah in aan ku jiray muhiim at dhan, iyo on lid ku ah. Tani waa sheeko caadiga ah.
Bal ii sheeg si faahfaahsan, sidee baad u samaysaa TS ah? Xaggee ayuu aad u hesho macluumaad ku?
Wakhtigaas, Waxaan ku baayacmushtaray on dhaafsi badan oo ay arkeen sida ay weeraro DDoS dhacaan, arkeen sida is dhaafsi kacday, arkay markii users ahaayeen daacad u ah is-dhaafsiga, iyo marka aan sameeyey, iyo sababta taasi u dhacday. Waxaan qoray shuruudaha tixraaca ka aan waayo-aragnimo, Waxaan ka dhigay wax soo saarka taas oo aan noqdo ganacsade ka noqon lahaa raaxo. Waxaan doonayay oo dhan hawlgallada ay ku noqon la fahmi karo. Waxaan barnaamijka loo isticmaalo in la abuuro interface ah, meesha aan ku xooday 25 bogagga goobta mustaqbalka iyo dhisay ay macquulka ah. Waxaa intaa dheer, Cryptoexchanges oo dhan asal ahaan waa isku mid.
Imisa jeer ayaad u isticmaali xal farsamo oo diyaar-dhigay?
Waxaan doonayay in ay isticmaalaan si ay u helaan una dir blockchain.info Seeraar. Wakhtigaas, waxay la siiyaa API dadweynaha. Marka marxaladdan hore, Sidaa darteed anigana waxaa la ii sheegay in ay ahayd ku filan si ay u helaan wax soo saarka ugu wanaagsan ee suurto gal ah kharashka ugu yar, ka dibna si fudud si loo wanaajiyo iyo in la wanaajiyo shay kasta. Laakiin, waxay noo beeniyay, oo aan ku sharaxay sababaha. Waxaan qabaa tani waa mid ka mid ah fashilaad ugu guulaha badan ka dhacay. Waxaan go'aansanay in aan ogaado sida ay shuqullo Seeraar, iyo macmiilka si buuxda uga xoq qoray, taas oo hadda si joogto ah horumarinta. Taasi waa, waxaan leenahay Salada Seeraar.
Tani waa Kooxda. Waxaan hore u lahaa koox si fiican u-dubaridan, kaasoo aannu u shaqeeyay on laba mashruuc. Laakiin waxaan ogaaday in aanan lahayn waayo-aragnimo ku filan si ay u abuuraan wax soo saarka tayo leh ee cryptosphere ah. Sidaa darteed, waxaan go'aansaday lisidda aqoon our hawlo dheeraad ah, tusaale ahaan, qaybqaatay horumarinta ilaalinta DDos-weeraro, adeegyada aad hesho lacag, iyo wixii la mid ah. Saddex sano aan ka shaqeeyey shaqo farsamo oo ay barbar – on mashaariic dhinac saddexaad ah in la fahmo sida wax walba oo shuqullada. Thanks to this, waxaan sidoo kale helay xeel dheer leh oo ka caawiyay loo sii horumariyo mashruuca.
The ugu banal waa lacag. Bilowgii, Waxaan ahaa awoodaan si ay u ururiyaan qiyaastii $ 300,000. Tani waa sanadka ee kooxda ee barnaamijyo, kharashka ugu yar ee, laakiin iyada oon loo eegin adeegyada sharciga. Laakiin waxay ahayd in 2013. Hadda, waxaan qabaa, ugu yaraan $ 1 milyan oo loo baahan yahay. Waxaan bilaabay in deegaan oo kala duwan oo tartan iyo xaalado kale, ka dibna waxaa jiray oo kaliya 5 weydaarsiga stock, iyo hadda waxaa jira boqolaal iyaga ka mid ah.
Waa maxay geolocation ee isticmaala aad?
dunida oo dhan, laakiin hadda waxaan mamnuucayo diiwaangelinta ka America sababtoo ah arrimaha sharciga.
Imisa shaqaale ku lug ammaanka?
Haddii ay jirto hawl deg-deg ah, markaas kooxda oo dhan ayaa ku hawlan it in, oo aan loo eegayn waxa waqtiga ay dhacday.
Ma jiraa Fadli ah helo dayacanka? iyo waxa?
Maalin kale, Fadliga bixisay helida suurtagal ah in maamulka e-mail been-. Dhab ahaan, iyagu ma ay dhab ahaantii fulin karo, laakiin waxay ahayd aragti ahaan suurto gal ah in ay ka faa'idaystaan ​​nuglaanta this.
Iyo inta sameeyey ay bixiyaan?
Dhowr boqol oo, qadar yar, tan iyo markii tani ma aha nuglaanta muhiim ah. Waxaan leenahay liiska kharashka lagu raadinayo kuwii ama halis kale.
Waa maxay lammaanaha ganacsiga ugu weyn ee ku saabsan is-dhaafsiga?
BTC / USD, LTC / USD, BTC / Lacagta, BT / Zcash.
Sidee baan u dhigi karto aan calaamo on your sarrifka?
Waxaan leenahay qaybta ah ku daray qadaadiicda, iyo waxa ay si cad u muujinaysaa, kuwaas oo aan ku dari kartaa oo kii aan cuninna.
Thanks for waraysiga xiiso
Waxa diyaariyey ka CryptoRadio kooxda
Inkastoo ballamada, Binance ...
👍 suulka UP & SUBSCRIBE NO...
channels CUSUB: TechStockHouse:...
Booqo website-kayaga: https://alt ...
Post Previous:Mashruuca Blockchain DFINITY Stiftung kicisaa $ 61M
Post Next:sarrifka crypto Canadian Coinsquare kicisaa $ 30M
Rosia Bence ayaa sheegay in:
make money on youtube views ayaa sheegay in:
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins ayaa sheegay in:
Seeraar & Cryptocurrency News – Seeraar Core, Crypto Addiction, and Poloniex Drama
Altcoin News – xaraf & Microsoft, Ubiq wins award, TenX & Ripple XRP on Huobi Pro
SEC Delays Bitcoin ETF Until December – Maanta Crypto News
BULL RUN Coming!? Bitcoin ETF Could Change Everything – Maanta Crypto News
altcoin AltCoin Buzz altcoin maalin kasta altcoins Seeraar bitcoin analysis Bitcoin crash bitcoin crash over news Seeraar bitcoin news today Bitcoin price bitcoin price growth bitcoin price news bitcoin technical analysis bitcoin today block silsilad BTC btc news cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency market cryptocurrency news cryptocurrency trading crypto news baahsan electroneum eos ethereum ethereum analysis ethereum news ethereum price how to make money maalgashado investing bitcoin investing crypto is bitcoin done crashing litecoin neo news Cabidkariin altcoins top tron when to buy bitcoin xrp